Ezumike izu ụka | Partnership Romance | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Ụbọchị izu ụka na ebe ndị pụrụ iche
Ụdị izu ụka na-emekarị
Nanị izu ụka ga-abụ izu ụka. Ịmalite na Saturday na mgbede ma na-arụsi ọrụ ike na akụkọ Monday ndị na-abịa nso n'ehihie Sọnde na-eweta nrụgide karia ntụrụndụ.
Ebumnuche maka ngwụcha izu ụka
Ọ bụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmalite ngwụcha izu ụka na mgbede Friday. Mgbe ahụ, nke mbụ, enwere ụra abalị, ọ bụrụhaala na ịchọrọ, na mmemme ahụ. Nri ụtụtụ na bed, ikekwe na champeenu ma ọ bụ champeenu, gụnyere. Ya mere, ị wusiri ike ịmalite ụtọ Satọdee na-abịa ma nwee obi ụtọ.
Di na nwunye n'anyasị ịhụnanya
Ụdị izu ụka na-eme nke ọma
Ya mere na ọ dịghị ihe na-eme ka mmekọrịta ahụ ghara ịdị njọ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghara iji izu ụka na-anọ n'ụlọ anọ. Ihe ị na-ahụ mgbe niile bụ ihe i nwere ike "dị". Otu esi esi n'osisi ruo ntu ma ghara inweta ezi udo.
Njem ị na-aga n'izu ụka izu ụka agaghị adị anya. Na nke gị ma ọ bụ obodo buru ibu karị, ọ bụ ezigbo ụlọ nkwari akụ. Maka ndị bi n'obodo ukwu, ụlọ ala ma ọ bụ ụlọ ndị ọbịa mara mma nke dị n'akụkụ oké osimiri bụ oké mgbanwe site na obodo ahụ siri ike.
Ọbụna ụlọ nkwari akụ okomoko nwere ike ịbụ ya otu ugboro. N'ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a, e nwere ndokwa pụrụ iche maka ndị di na nwunye. Ị nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ nchịkọta nke ọma nke gụnyere bath, massages na ọgwụgwọ ndị ọzọ dị mma maka ya na ya. Enwere ike ịnweta ngwa ndị a ọnụ, ma n'ime ụlọ gị ma ọ bụ na spas onwe nke hotels.
Mgbe a bịara n'ịdị mma, ọ bụghị naanị mkpụrụ osisi nke okooko osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi, nke ụmụ nwanyị nwere ike ịhọrọ, ma ndị nwere obi ụtọ dịka ịsa ahụ n'ime mmiri ọṅụṅụ biya, na-eji akwa ma ọ bụ ngwakọta mmanụ aṅụ, nke ndị ikom ahụ dị ka nnukwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-eme na hotels, ị nwere ike ọ gaghị achọ ịnọ n'ụlọ nkwari akụ dị mma na oge gị n'efu. Kedụ banyere ngwụsị izu ụka na ngwugwu? N'ịbụ ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ dị mma nke ọma n'ebe ahụ. A na-eme ka igloos dị mma ma na-egbuke egbuke.
Echiche ọzọ bụ izu ụka na hay. A na-enweta ụlọ Hay ugbu a n'ọtụtụ mpaghara. Ndokwa ndị dị otú a na-agụnye ịṅụ mmanya, nlegharị ikpe ụlọikpe, nri ịkụnye ọkụ ọkụ dị iche iche ma wee nọrọ n'otu ụra buru ibu na ahịhịa na-esi ísì ụtọ. A na-edozi nri ụtụtụ site na ihe ndị dị n'ógbè ahụ wee jee ozi na oge achọrọ.
A na-ahụ izu ngwụsị izu na Baumhaushotel. N'ebe ndị dị elu, ụlọ osisi ndị ahụ siri ike ma nwee nchebe, ha enweghịkwa nkasi obi ọ bụla.
Ihe ọhụrụ na-emekarị maka izu ọchị na-abịa site na USA. Enweela họtel pụrụ iche maka oge ụfọdụ na ngwá ọrụ dị nnọọ iche. A na-achọ ụlọ ndị ahụ mma dị ka isiokwu nke eroticism. Ndị dị n'ime ime ụlọ, nnukwu ebe egwuregwu na ọtụtụ ihe egwuregwu dị na hotels ndị a, nke ndị dị ugbu a na Germany.
Ezi uche bụ ihe dị mkpa, a na-elekọtakwa ahụ nke ọma n'ime ụlọ ahụ. Ụlọ ndị nwere ọnọdụ na-egbuke egbuke anaghị ekwe ka ụmụaka bụrụ ndị ọbịa, n'ihi ya ị nwere ike ịmepụta echiche efu ya.
Na-eche dị ka eze ma ọ bụ eze nwanyị: nke ahụ bụ ihe ọtụtụ ụlọ ndị eze na-eme. N'ebe obibi ndị isi ị na-eji eme njem n'ụbọchị na ehihie na abalị ma na-emebi nri nri dịka usoro iwu niile si eji esi nri.
A na-atụle izu ụka na-adọrọ mmasị ka ọ ghara ịhapụ mmepeanya niile. Ụlọ ma ọ bụ ụlọ, ụlọ mara mma nke dị n'akụkụ ọdọ mmiri, n'akụkụ oké osimiri ma ọ bụ n'ugwu na-akpọ gị òkù.
Maka nri zuru ezu na ihe zuru ezu na akwa akwa akwa na ihe ndị ọzọ na-enyere ndị ụsụụ ahụ aka. Site na nke a, ị na-eburu isi ihe dị na ebe obibi ma nwee ruo mgbe ị ga-enwe udo dị ebube. Ị nwere ike iji ụbọchị ndị a n'ụlọ ma ọ bụ n'ihe ndina ma ọ bụ gaa n'àgwà. Enweghị ekwentị, enweghị kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ọ dịghị TV na redio ọ bụla ekwentị mkpanaka kwesịrị imebi ọnụ.
Mkpakọrịta na-adị na ọdịdị
Ọ bụ n'ikpeazụ oge iji nwee obi ụtọ, na-esi nri ma na-anụ ụtọ ọnụ. Omume na-aga n'ihu na-efu isi gị ma na-etinye ohere maka echiche na echiche ọhụrụ. Ị na-ege ntị na ụda nke ọdịdị na-eche n'ezie na ndụ na nke ọma.
Oge izu ụka
Egwú bụ ihe na-eme ka ịhụnanya bụrụ enyi. Maka izu ụka izu ụka nke izu ụka, ị nwere ike ijikọta nleta nleta na nri dị ụtọ na abalị anọ na ụlọ nkwari akụ mara mma.
Ihe omume ahụ na-achọ egwu nke ndị mmekọ abụọ ahụ nwere ike imeri, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị ọhụrụ nke ha abụọ amaghị ma. O nwere ike ịbụ kpochapụ ma ọ bụ kụrụ, pop na nkume, ebe ị na-ebi n'akụkụ ya. Ọbụna egwu egwu na akụkọ ịhụnanya na ihe ngosi ihe nkiri na-adọrọ nnọọ mma iji nwee obi ụtọ.
Ọ bụrụ na ihe omume ahụ na-ewere ọnọdụ na Fraịdee, ịnwere ike iji Saturday dị egwu maka ihe ndị ọzọ. Ụgbọ njem ndị na-ahụ anya na helikopta ma ọ bụ na balloon dị n'ógbè ahụ bụ ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu.
Ọbịbịa nke nlebara anya nke bath na ebe nchekwa sauna na ụwa nke ọma na-enye onwe ya na ihu igwe na-adịghị mma. Ọbụna njem ịzụ ahịa nwere ike ịbụ ezigbo ịhụnanya, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ụlọ na-agba ume, nke ị na-agbalị na mgbede na nkwari akụ ahụ.
Romance na mmekọrịta